HIBRU 12 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (HI 12)
Na-atụgharịnụ uche nꞌihe banyere Jisọs oge nile. Tụgharịanụ uche banyere mmeso o mesoro ndị mmehie ahụ megidere ya. Nke a ga-eme ka unu hapụ ịda mba nꞌọsọ unu na-agba.
Chetanụ na mmadụ ọ bụla anwụbeghị nꞌetiti unu nꞌihi ọgụ nke unu na-alụso mmehie.
Unu echefuola ihe akwụwkọ nsọ kwuru? Nꞌime ya ka Chineke na-agwa unu okwu dị ka ụmụ sị: “Nwa m ewela iwe mgbe Chineke na-apịa gị ụtarị. Adala mba mgbe ọ na-egosi gị ụzọ i siri mejọọ.
Nꞌihi na onye Chineke hụrụ nꞌanya ka ọ na-abara mba. Ọ bụkwa onye ọ nabatara dị ka nwa ya, ka ọ na-apịa ụtarị.”
Ya mere ọ bụrụ na Chineke adịghị abara unu mba mgbe unu na-enupụ isi nꞌiwu ya, unu abụghị ụmụ ya. Unu enwekwaghị oke nꞌezinụlọ ya. Nꞌihi na ụmụ ya nile ka ọ na-abara mba.
Ndị bụ nna anyị site nꞌanụ ahụ na-azụ anyị nwa oge nta dị ka ha si tụpụta nꞌuche ha. Ma Chineke na-azụ anyị nꞌihi ọdịmma anyị. Ọ na-achọ ka anyị keta oke nꞌịdị nsọ ya.
Ya mere, setipụ aka gị ahụ ike gwụrụ. Guzozie ike nꞌụkwụ gị ahụ na-ama jijiji.
Debe ụkwụ gị nꞌụzọ ziri ezi. Ka ndị na-adịghị ike hụ gị. Ọ bụrụ na ha esoro gị ha ga-adị ike.
Ka onye ọ bụla hapụ ịdaba na mmehie ịkwa iko. Ka onye ọ bụla hapụ iji Chineke gwurie egwu dị ka Ịsọ mere. Ịsọ bụ onye rere ọnọdụ ọkpara ya nꞌezinụlọ nna ya nꞌihi otu efere nri.
Unu maara na o mechara chọọ ka nna ya gọzịe ya, ma nna ya agọzighị ya. Nꞌanya mmiri ọ rịọrọ ka a gọzie ya ma ọ nataghị ngọzi ahụ. Nꞌihi na oge agafeela imezi ihe o mibiri na mbụ.
O nwebeghị oge unu gozoro ọtụ nꞌihu ihe na-eyi egwu, na ọkụ na-enwusi ike, na ọchịchịrị na oke ifufe. Ụmụ Izirel hụrụ ihe ndị a nile nꞌugwu Sainai oge Chineke nyere ha iwu ya.
Nꞌihi na nꞌoge ahụ ha nụrụ ụda opi. Ndị mmadụ nụkwara olu Chineke. Ma ha enweghị ike nagide ihe ha nụrụ. Ha rịọrọ Chineke ka ọ kwụsị ịgwa ha okwu.
Ha enweghị ike ịnagide iwu Chineke. A sịkwarị na anụmanụ ọ bụla bịaruru ugwu ahụ nso ọ gaara anwụ.
Mosisi nꞌonwe ya tụrụ egwu, maakwa jijiji. Nꞌihi na ihe ọ hụrụ karịrị ya ukwuu.
Unu abịala nꞌụlọ nzukọ Kraịst ebe ndị nile e dere aha ha nꞌeluigwe na-anọkọ. Unu abịakwutela Chineke onye ga-ekpe mmadụ nile ikpe. Unu abịakwutekwala ndị nile a gbapụtara, bụ ndị nọ nꞌeluigwe. Ndị ahụ e mere ka ha bụrụ ndị zuru oke.
Ya mere gbalịsienụ ike ịhụ na unu na-erubere Chineke isi. Chineke tara ụmụ Izirel ahụhụ nꞌihi na ha nupụrụ isi nꞌebe Mosisi nọ. Ọ ga-atakwa anyị ahụhụ ma ọ bụrụ na anyị ajụ ige ntị. Nꞌihi na Chineke nꞌonwe ya si nꞌelu na-agwa anyị okwu.
Mgbe Chineke si nꞌugwu Sainai kwuo okwu, olu ya mere ka ụwa maa jijiji. Ma ugbu a Chineke na-asị, “Mgbe ọzọ ọ bụghị nanị ụwa ka m ga-eme ka ọ maa jijiji kama aga m emekwa ka eluigwe maa jijiji.”
Ihe Chineke na-ezube ime bụ iwezụga ihe ndị ahụ na-agaghị anọgide mgbe ịma jijiji a gasịrị. Ihe ga-afọdụ ga-abụ nanị ihe guzosịrị ike.
Nꞌihi na Chineke anyị dị ka ọkụ na-ere ọzara. Ọ na-erepịa ndị nile na-adịghị eme ihe ọ na-achọ.